Home News Maxaa loo heystaa Taliyaha Saldhiga Degmada Warta Nabada?
Maxaa loo heystaa Taliyaha Saldhiga Degmada Warta Nabada?
Kadib markii shalay uu soo baxay warka la xiriira in xabsiga la dhigay Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Warta Nabadda iyo laba askari oo la shaqeynaysay, ayaa waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan sababta loo xiray Taliyaha.
Gaashaanle Dhexe Cabdirisaaq Soomane Xuseen oo ahaa taliyaha Ciidanka Booliska saldhiga degmada Warta nabadda iyo Alifle Cabdi Cumar Isaaq taliyaha Baarista Dambiyada Saldhiga iyo Kormeere labaad Cabdifitaax Maxamuud Cabdi oo ka tirsana Ciidamada Saldhiga Degmada ayaa lagu soo eedeeyay in ay qaateen lacag laaluush ah.
Warbaahinta ayaa soo ogaatay in Taliyaha kiiska loo xiray uu yahay mid sax ah, islamarkaana dad shacab ah uu ka qaatay lacag aan badneyn isaga iyo labada askari.
1-dii Bishan ayeey aheyd markii la xiray Taliyaha iyo labada askari ee la socotay, waxaana musuqa lagu helay uu yahay dad dacwad Saldhiga u tagay inay ka qaateen lacag dhan $50 doolar oo ay kala qaybsadeen saddexdaan ruux.
Taliye Soomane, ayaa dhawaan loo soo bedelay Saldhiga Degmada Warta Nabadda, kadib markii laga bedelay Taliyihii hore ee Saldhiga oo lagu magacaabi jiray Canjeex.
Saraakiil ka tirsan Booliska Somaliya ayaa sheegay in xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida laga sugaayo cadeymo dheeri ah oo ku aadan kiiska sarkaalkaan, si sharciga loo waafajiyo, maadaama isaga oo Sarkaal qaran ah uu qaatay laaluush aan macno badan laheyn.
Dowladda Somaliya ayaa muddooyinkaan dambe waxa ay xoogga saartay arrimaha la xiriira musuq maasuqa oo dowladda ay ku dadaaleysaa sidii loo dabargoyn lahaa dadka caadada ka dhigtay musuqa.
Previous articleRuux lagu Dilay Degmada Waaberi iyo amaanka Caasimada oo faraha ka baxay
Next articleUrurka Al Shabaab oo xiray Haween diiday iney Caruurtooda Askareeyaan
Axmed Karaash iyo Taliyaha Booliska Puntland oo Khilaaf ka dhex-curtay (Faah-faahin)